Sida loo sameeyo bandhigyada PowerPoint | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo sameeyo bandhigyada PowerPoint
Lola curiel | | Qalabka Naqshadeynta, Tababarada, dhowr
Microsoft PowerPoint waa mid ka mid ah aaladaha ugu isticmaalka badan ee lagu soo bandhigo. Way fududahay in la isticmaalo oo waxay bixisaa fursado aan dhammaad lahayn markay tahay abuurista naqshad hal abuur iyo xirfad leh. Mashruucan waxaan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo barnaamijkan meel hoose, waxaan kugu soo bandhigi doonaa aaladaha aasaasiga ah waxaanan ku soo dari doonnaa talooyin aad ku guuleysan karto bogaggaaga Ma rabtaa inaad barato sida loo sameeyo bandhigyada PowerPoint? Ha moogaanin inta ka hartay boostada.
1 Ka bilow PowerPoint
1.1 Dukumenti furan
1.2 Abuur bog cusub
1.3 Tus ama qari taliyayaasha iyo hagayaasha
2 Qalabka ugu muhiimsan ee lagu soo bandhigo PowerPoint
2.1 Qalabka qaababka
2.2 Qalabka qoraalka
2.3 Qalabka sawirka
2.3.1 Ka saar qalabka lacagaha
2.3.2 Saamaynta iyo hagaajinta
2.5 Qalabka Sawirka
3.1 Adeegso ilaha dibadda
3.2 Ka taxaddar midabka
Ka bilow PowerPoint
Markaad barnaamijka furto, taas waad arki doontaa PowerPoint waxay bixisaa sheybaarado horey loo qorsheeyay oo diyaar u ah inaad geliso waxyaabahaaga. Dabcan waad isticmaali kartaa, laakiin qoraalkan waxaan ku dooran doonaa inaan doorto dukumiinti maran oo aan ku dari doonno cunsurro iyo ilo.
Haddii aad horeyba u furtay barnaamijka, sidoo kale waad abuuri kartaa dukumiinti cusub adoo gujinaya tab faylka> bandhig cusub liiska ugu sareeya.
Abuur bog cusub
Qeybta guriga waxaad ku leedahay badhan oranaya "Sawir cusub", adigoo gujinaya waxaad soosaaraysaa bogag cusub. Haddii aad riixdo fallaarta yar ee midigta badhanka, waad arki doontaa taas waxaad abuuri kartaa bogag raaci kara sheybaarka caadiga ah. Waxaa jira nashqado loogu talagalay in lagu dalbado dhammaan noocyada mawduucyada: cinwaanada, cinwaanka iyo dulucda, labalaab, si isbarbardhig loo sameeyo
Si kastaba ha noqotee, si aan u baranno sida loo adeegsado aaladda barnaamijka waxaan u baahannahay isbarbar-dhiggu inuu noqdo mid qaawan sida ugu macquulsan, sidaa darteed ma dooran doonno midkoodna waxaanna uga tege doonnaa boggeena bannaan.
Tus ama qari taliyayaasha iyo hagayaasha
Si aanan u qaybin cunsurrada "isha" waxaan u hawlgalleynaa xeerarka iyo tilmaamaha. Tilmaamuhu waxay naga caawin doonaan inaan ku ilaalino isla marinnada iskuulada oo dhan soo bandhigida.
Si aad u dhaqaajiso xeerarka iyo tilmaamaha, waxa lagaa rabo inaad sameyso waa inaad ku xusho "aragtida" tabta.. Taladaydu waxay tahay inaad ilaaliso hagayaasha dhexe, toosan iyo toosan. Lahaanshaha shaashadda oo loo qaybiyo afar waa xeelad fiican oo si fiican loo dalbado qaybahaaga.
Sidoo kale, waa inaad abuurtaa afar hage oo kale si aad u qeexdo waxa soohdimaha slides kaaga noqon doonaan. Si aad u abuurto hageyaal cusub, waa inaad kaliya riixdaa "ikhtiyaarka" furaha kumbuyuutarkaaga oo jiido kuwa jira. Ogsoonow in markii aad sidan sameyso sanduuq ka dhex muuqda kaas oo ay ku muujinayaan dhererka aad dhigeyso. Markaad dhammayso tillaabadan, waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo naqshadaynta!
Qalabka ugu muhiimsan ee lagu soo bandhigo PowerPoint
Qalabkani wuxuu noqon karaa mid aad waxtar u leh abuurista walxaha qurxinta ee bixiya aqoonsiga iyo midnimada qaabeyntaada. In lagu daro qaabab, Waxaan aadeynaa qeybta "insert"> "foomamka". Waxaad furi doontaa menu yar oo aad ku dooran karto habka aad rabto.
Si aan u beddelno astaamaha foomka waxaan u tagi doonnaa guddiga qaab qaabeedka, halkaas ayaad wax ka beddeli kartaa midabka buuxa, waxaad ku dari kartaa xadka xitaa waxaad dalban kartaa nooc saameyn ah.
Kiiskeyga waxaan ku ciyaarayaa leydilada madow si aan u abuuro moodooyin kala duwan:
Waxaan abuuri doonaa qaab loo adeegsado leydi ahaan shaashad madaxeed, iyadoo la dhigayo salka hoose ee boodhka
Waxaan abuuri doonaa boodh leh taariikh madow
Ugu dambeyntiina, waxaan abuuri doonaa laba nooc oo dheeri ah kaas oo leydiku u oggolaanayo inuu shaashadda u qaybiyo laba (mid leh qaab midigta ka kalena qaab bidix ah)
Sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa qaababka sida sanduuqa qoraalka, si loo muujiyo qaybo ka mid ah waxyaabaha ku jira.
Haddii aad rabto abuur qaabab caado ah, waad samayn kartaa! Sifudud dhagsii qaabka oo qaabka qaabka isticmaal ikhtiyaarka "wax ka beddel qodobbada" in la beddelo qaabka asalka ah.
Qeybta qaabka waxaad sidoo kale abaabuli kartaa qaababka waxaad ku soo qaadan kartaa qaababka xagga hore, waxaad u diri kartaa xagga asalka adigoo adeegsanaya aaladda isku toosan waxaad hubin kartaa in dhammaan walxaha si qumman loo dhigay.
Qalabka qoraalka waa lagama maarmaan haddii aad rabto inaad abuurto bandhigyo wanaagsan. Wixii samee sanduuqa qoraalka waa inaad u tagtaa guddiga "Gali" oo xulo "sanduuqa qoraalka".
Hal guji ayaad u samayn kartaa sanduuqa si uu ula qabsado waxaad qori doontid ama haddii aad doorbido, waxaad jiidi kartaa jiirka si qoraalka uu ugu koobnaado cabir gaar ah.
Recuerda que waad hoosta ka xarriiqi kartaa oo adeegsan kartaa iftiin si aad u soo jiidato dareenka qaybaha gaarka ah ee qoraalkaaga. Tusaalaha, waxaan ku muujiyey mugdiga si aan u awoodo inaan beddelo farta cad oo aan abuuro isbarbardhig u sheegaya akhristaha: "tani waa muhiim".
Kuwa kale xulashada qoraalka waa WordArt, qoraallada soo socda loogu talagalay by PowerPoint taasina waxay leedahay saameyn gaar ah iyo astaamo. Waad u habeyn kartaa iyaga si aad u siiso taabashadaada shakhsi ahaaneed ama aad ula qabsato qaabka soo bandhigga waana ilaha weyn ee cinwaannadaada.
Sawirada waa a qalab isgaarsiineed oo aad u awood badan, maxaa yeelay waxay awood u leeyihiin inay ku soo koobaan qaddar aad u tiro badan oo ku jira meel aad u yar oo sababa saameyn weyn.
hay laba siyaabood oo loogu daro sawirrada aad PowerPoint:
Waxaad aadi kartaa qeybta "insert"> "images" oo waxaad ka dooran kartaa "sawirka faylka"
Waxaad si toos ah sawirka ugala soo bixi kartaa galka.
Ka saar qalabka lacagaha
Adeegsiga sawirada bilaa asalka ah ayaa kaa caawin kara inaad ku darto taabasho ka duwan is-jiidashadaada. Warka fiicani waa in, mahadsanid aaladda "saar asalka", waxaad ka saari kartaa asalka sawiradaada adigoon ka tagin PowerPoint.
La qalab "ka saar lacagaha"waa waxaa laga heli karaa "qaabka sawirka", kaas oo si otomaatig ah uga muuqda shaashadda dusheeda markii aad gujiso sawir kasta. Way fududahay in la isticmaalo, waa inaad isticmaashaa ku xulo qalinka "+" waxaad rabto inaad keydiso iyo qalinka "-" waxaad rabto inaad ka saarto ka sawir Markaad dhamaysid, guji calaamadda si aanad u waayin isbeddelada.
Saamaynta iyo hagaajinta
In sawiradaadu leeyihiin qaab la mid ah waxay ku siin karaan gunno tayo leh soo bandhigidaada. Qaabka muuqaalka waxaad haysataa laba qalab oo la heli karo oo kuu oggolaanaya inaad ku hagaajiso sawirada.
Waxaad isticmaali kartaa sixitaanka iyo hagaajinta midabka si aad sawiradaada u siiso muuqaal mideysan ee bogagga Tusaalaha, waxaan doortay inaan sawiradayda ku dhejiyo madow iyo caddaan waxaanan hagaajiyay dhalaalka si natiijada ka sii fiicnaato.
Astaamaha, sida sawirrada, waxay kaloo leeyihiin awood ay ku soo koobaan fikradaha meel yar. Nasiib wanaag PowerPoint waxaad ku dari kartaa astaamo adigoon barnaamijka ka bixin. Haddii aad riixdo "icons" qaybta "insert", waxaad galaysaa guddi dhinac ah oo aad ku haysato tiro aan dhammaad lahayn oo ah astaamo aad ka xulan karto. U adeegso mashiinka raadinta si aad u shaandhayso oo aad u hesho kuwa aad ugu baahan tahay si dhakhso leh. Qaybta "qaab muuqaal ah", taasi waxay ka muuqaneysaa kor marka aad riixdo midkood, waad wax ka beddeli kartaa si loogu waafajiyo qaabka bandhiggaaga.
Sawir gacmeedyadu aad ayey waxtar u leeyihiin inay u gudbiyaan fikradaha si muuqaal ah, si dhakhso leh oo cad. Maskaxda ku hay in garaafyada aysan u adeegin oo keliya inay muujiyaan xog aad u faahfaahsan, waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa iyaga sidii il abuur ah si aad ugu gudbiso farriin qaab kale.
Waad ku dari kartaa shaxanka adoo aadaya guddi "geli"> "sawiro". Waxaad markaa ka heli doontaa guddi yar oo hoos-u-dhac ah oo dhammaan noocyada sawirada ee PowerPoint ay bixiso ay ka muuqdaan. Xullo waxa ugu habboon iyo xaashida 'Excel' ayaa si toos ah u furi doonta taas oo aad ku qori karto xogta. Markaad dhameysato, muhiim maahan inaad keydiso xaashida macluumaadka, si fudud uxir, intaad galeyso xogta garaafka ayaa wax laga badali doonaa.
Waad beddeli kartaa qaabka shaxda, qaybta qoraalka iyo qaybta garaafka labadaba. Waad beddeli kartaa font iyo cabirka. Qaybta qaabka waxaad ku beddeli kartaa qaabka garaafka iyo midabada.
Adeegso ilaha dibadda
Adeegso ilaha dibadda waa fikrad fiican in la kobciyo naqshadeynta bogagga. In kasta oo PowerPoint uu yahay barnaamij aad u dhammaystiran waxaadna ku abuuri kartaa bandhigyo waaweyn agabyada ay bixiso, hal-abuurnimo dheeri ah weligood waxba kuma yeeli doonaan!
Tusaale ahaan, waxaad aadi kartaa Picsart Google si aad u soo dejiso stickers taasi waxay u adeegi doontaa inay si gaar ah u taabato bogagga. Had iyo jeer waxaan ku raadiyaa ereyada "Guridda", "cajalad", "sanduuqa qoraalka" oo waxaan u isticmaalaa kuwa sida badan igu qanciya sida sanduuqa qoraalka ama qaab sawir ah.
Ka taxaddar midabka
Midabku sidoo kale waa qalab isgaarsiineed, xitaa wuxuu awood u leeyahay inuu kiciyo dareemo iyo shucuur. Maaha wax isku mid ah in la doorto isku-dhafkan midabbada hore markii loo doorto isku-darka huruud, madow iyo caddaan. Isbarbardhigga kan dambe, isku-darka asalka madow ee caddaan ama jaalle ah, ayaa gudbiya intaas ka sii wanaagsan. fariin ku saabsan xiisaha iyo halista aan u soo qaatay tusaalaha. Si kastaba ha noqotee, jilicsanaanta jilicsan, si kastaba ha noqotee, waxay aad ugu fiicnaan laheyd horumarinta, tusaale ahaan, nooc ka mid ah dharka ilmaha.
Haddii aad ubaahantahay dhiirigelin waxaad aadi kartaa ColourLovers, bogga internetka oo aad ka heli doontid gogosha durba la sameeyay. Sidoo kale Waa kheyraad wanaagsan in la aado Adobe Color si loo abuuro isku-dhafnaan iswaafajinaya oo si weyn u shaqeeya.
Ku jira PowerPoint waxaad abuuri kartaa midabkaaga midabka u gaarka ah. Si aan u keeno mid ka mid ah buugyarahaan 'PowerPoint', waxa aan inta badan sameeyo waa inaan ka qaado shaashadda shaashadda, ku dhejiyo boodhka oo aan indhaha ku keydiyo dhammaan midabada aan hadhow ku dabaqi doono waxyaabaha aan ku soo bandhigayo.
Qaab qorista, sida midabka, ayaa xiriirisa, sidaas darteed waa lagama maarmaan inaad waqti siiso xulashada noocyada saxda ah. Haddii aadan ku qancin qoraallada aad horay u rakibtay, waxaad kala soo bixi kartaa farriimaha cusub internetka. Google Font waa mid ka mid ah bangiyada caanka ah ee caanka ah iyo waliba midka ugu kalsoonida badan.
Si aad u rakibto nooc cusub waxaad u baahan tahay inaad doorato midka aad rabto, soo dejiso, furi faylka oo guji font font.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Sida loo sameeyo bandhigyada PowerPoint
Adobe Premiere Pro iyo Premiere Rush ayaa lagu cusbooneysiiyay hagaajinta waxqabadka